Best Lugood bedelka Mac OS X =
> Resource > Mac > Best Lugood bedelka Mac OS X
Ma waxaad doonaysaa software si uu u bedelo Lugood on Mac, si aad maamuli kartaa files labada on Mac iyo iPhone, iPod taabto, ama iPad si fudud? Si aad u noqoto qof daacad ah, Lugood waa ku wanaagsan yahay bixinta files warbaahinta ka Mac in iDevices iyo maaraynta files warbaahinta on Mac. Si kastaba ha ahaatee, ma wareejin karo files warbaahinta ka iDevices si Mac oo si gaar ah wax aad looga xumaado, haddii aad rabto in lagu wareejiyo heesaha oo kaliya ay jiraan qalabka si aad u Lugood ama isticmaal files warbaahinta on qalabka dib u dhiska Lugood Library. Halkan waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Bedelaadda Lugood ah u Mac - Wondershare TunesGo (Mac) . Labadaba waxa Lugood iyo waxa aanay samayn karin in files warbaahinta Waxa ay.
Download Bedelaadda Lugood u Mac in ay isku day ah!
Fiiro gaar ah: Bedelaadda Lugood ee Mac taageeraa dhamaan noocyada of iPhone, iPod taabto, iyo iPad socda ee macruufka 5/6/7. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin music iyo playlists ka iPod classic, shaandheeyn lagu iPod iyo nano iPod si Mac iyo Lugood. Bedelida Lugood ee Windows maxkamad version sidoo kale waa la heli karaa. Waxay leedahay qaababka badan ee bedeli Mac Lugood. Haddii aad leedahay PC Windows ah, waxa aad isku dayi kartaa.
Haddii aad raadineyso weeyna barnaamij lagu bedelo Lugood, waxa ay tahay in ay sameeyaan waxa Lugood dhaco shot - wareejinta files warbaahinta ka qalabka macruufka in Mac iyo maarayn files on qalabka. Tani waa waxa Lugood bedelka Mac falaa.
Bedelka music ka aaladaha Apple inay Lugood Library. Ka dib marka aad isku xidha aad Apple qalabka kombiyuutarka iyo bilowno Bedelaadda Lugood Mac software , furmo suuqa hoose, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka "Si Lugood". Waxaa Click, ka dibna waxaad ka heli doontaa in heesaha oo dhan ku qalab aad ayaa loo wareejiyay Lugood Library on Mac. Si aad u wareejin heeso loo doortay in ay Lugood, furmo Music ah, waxaad dooran kartaa song oo guji "Dhoofinta in Lugood". Haddii gabay ayaa jiray Lugood, markaas icon Lugood waxay hor in la muujiyaa doonaa.
Dib videos ka qalabka macruufka in Mac. Iyada oo ay taasi bedelka Lugood, waxa kale oo aad dib kartaa labada qalabka diiwaan macruufka iyo kuwan videos si toos ah aad soo bixi ku saabsan qalabka si Mac.
Photos Dhoofinta ka qalabka macruufka in Mac. Haddii aad isticmaasho qalabka macruufka ah sida camera jeebka, waxaad u baahan kartaa inaad si joogto ah u dhoofiyaan photos oo bilaash ah ilaa meel ama edit dheeraad ah. Lugood Bedelaadda app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofin sawiro ka qalabka macruufka in Mac in Dufcaddii.
Lugood bedelka app Mac ma ahan oo keliya kuu oggolaanayaa in aad samayn waxyaalaha kor ku xusan, waxa ay kaa caawinaysaa in aad maamuli files on iPhone. Waxaad meesha ka saari kartaa heeso rabin, sawiro, iyo videos, la abuuro playlists, ku dar album sawir, iyo wixii la mid ah.
Sida app badalka ah ee Lugood on Mac, Wondershare TunesGo (Mac) ayaa sidoo kale awood u aad si ay u gudbiyaan songs, videos, sawiro ka soo Mac qalabka macruufka. Oo haddii audio ama file video aan ay taageerto qalab macruufka aad, TunesGo (Mac) waxaa beddeli doonaa qalab qaab saaxiibtinimo inta ay socoto wareejinta.
Isku day Bedelaadda Lugood hadda!
Laba Siyaabaha hoos Mountain Libaaxa in Libaaxa
Sidee Waxaad ka Crore Machine Download karaa Music
Avidemux u Mac Alternative (Mountain Libaaxa ka mid ah)